किड्नी मानव शरीरको निकै नै महत्वपूर्ण अंग हो । यसले रगतलाई सफा गर्ने, शरीरका लागि आवश्यक तत्व छानेर बाँकी विकारलाई पिसाबको माध्यमबाट बाहिर पठाउने काम गर्दछ । मानव शरीरमा दुईवटा किड्नी हुन्छन् ।
किड्नीको खराबीले तपाईंलाई मृत्युको मुखसम्म पुर्‍याउन सक्छ । त्यसैले किड्नीलाई बचाउनका लागि हामीले निकै साबधानी अपनाउनु जरुरी छ ।
हामीले सामान्य मानेर ख्याल नगर्ने कतिपय कुराहरु छन्, जसले हाम्रो किड्नीलाई दिनप्रतिदिन खराब बनाइरहेको छ । आजैबाट यस्तो कुरामा ख्याल गर्‍यौं भने किड्नी नै ड्यामेज हुनबाट बचाउन सक्छौँ ।
के-के हुन् त यी सात कुरा ?
१. पानी कम पिउनु
यदि तपाईं पर्याप्त मात्रामा पानी पिउनु हुँदैन भने तपाईंको किड्नी खराब हुने सम्भावना निकै बढी हुन्छ । किड्नीलाई रगत सफा गर्नका लागि पर्याप्त मात्रामा झोलिलो पदार्थको आवश्यकता पर्छ । पानी कम पिउँदा यसका लागि आवश्यक झोलिलो पदार्थ पुग्दैन, जसका कारण किड्नीले राम्रोसँग काम गर्न पाउँदैन । यस्तो अवस्थामा तपाईंको शरीरबाट बाहिरिनु पर्ने विकार तत्व शरीरमा नै रहन्छ । यसले शरीरका अन्य अंगहरुलाई त प्रभाव पार्छ नै, किड्नी खराब गर्न पनि निकै ठूलो भूमिका निभाउँछ ।
२. पिसाब रोक्नु
यदि तपाईंले लामो समयसम्म पिसाबलाई रोक्नुहुन्छ भने यो किड्नीका लागि निकै घातक बानी हो । यस्तो बानीले किड्नीमा पथ्थरी हुने तथा किड्नी नै ड्यामेज हुने खतरा बढाउँछ । त्यसैले पिसाब लाग्दा रोकेर बस्ने गल्ती कहिल्यै नगर्नुहोस् ।
३. नुनको अत्याधिक सेवन
नुन मानव शरीरका लागि आवश्यक तत्व त हो नै । तर, पनि यसको अधिक सेवन हाम्रा लागि फाइदाजनक हुँदैन । नुनको अत्याधिक सेवनले शरीरमा रक्त चाप बढ्दछ । जसले किड्नीलाई पनि अतिरिक्त बोझ पर्न जान्छ । यस्तो बोझले किड्नीलाई खराब गर्न भूमिका खेल्छ । दिनमा ५ ग्राम भन्दा बढी सोडियम हाम्रालागि फाइदाजनक हुँदैन ।
४. खानामा मिनरल्स र भिटामिनको कमी
भोजनमा फलफूल र ताजा सागपात समावेश हुनु किड्नीसहित पूरै शरीरका लागि लाभदायक हुन्छ । किड्नी खराब हुने तथा पथ्थर जम्ने खतरा तब हुन्छ, जब हाम्रो भोजनमा मिनरल्स र भिटामिनको कमी हुन्छ । किड्नीलाई खतराबाट जोगाउनका लागि म्याग्नेशियम र भिटामिन6निकै नै महत्वपूर्ण तत्व हो ।
५. निद्राको कमी
जब हामी मस्त निदाउँछौं, तब हाम्रो किड्नीका तन्तुहरुको नवनिर्माण हुन्छ । त्यसैले पनि पर्याप्त मात्रामा निदाउनु किड्नीका लागि अति नै आवश्यक हुन्छ । यदि तपाईं पर्याप्त निदाउनु हुँदैन भने यो कार्यमा बाधा पुग्छ । जसको प्रत्यक्ष असर किड्नीमा पर्दछ ।
६. कोल्ड ड्रिंक्स सेवन
कोल्ड ड्रिंक्स पिउँदै गर्दा सायदैले महसुस गरेका हुन्छन्, यो हाम्रो शरीरका लागि कति हानिकारक छ भन्ने कुरा । अधिक मात्रामा कोल्ड ड्रिंक्स पिउँदा शरीरमा रहेको प्रोटिन पनि पिसाबको माध्यबाट बाहिर निस्किन्छ ।
यसको अर्थ भनेको तपाईंको किड्नीले सही ढंगले काम गर्न सक्दैन भन्ने नै हो । किड्नीले सही ढंगले काम गर्ने हो भने शरीरलाई आवश्यक तत्व बाहिर निस्किन नै पाउँदैन । यसरी किड्नीले काम नगर्दा नगर्दै अन्ततोगत्वा किड्नी पूरै ड्यामेज हुनसक्छ ।
७. रक्सी सेवन र मांसहार
मासु खाँदा हाम्रो किड्नीको काम निकै बढ्दछ । खुराकमा अत्याधिक प्रोटिन हुँदा किड्नी निकै व्यस्त रहनुपर्छ । मासु अत्याधिक प्रोटिन पाइने पदार्थ हो । त्यसैले यसले किड्नीलाई निकै व्यस्त राख्दछ । जसले किड्नीलाई खराब बनाउन भूमिका खेल्छ ।
यसको अर्थ मासुले हाम्रो शरीरमा फाइदा नै गर्दैन भन्ने होइन । प्रोटिनका लागि मासु सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्रोत पनि हो ।
साथै रक्सी सेवन पनि किड्नीका लागि प्रतुत्पादक हुनसक्छ । नियमित अल्कोहल सेवन गर्दा किड्नीमा नराम्रो असर पर्दछ ।